Waa maxay Suuqgeynta Daryeelka Caafimaad? | Martech Zone
Markii aad gasho shil baabuur, aad hoos u dhacdo ama aad la kulanto nooc kale oo dhaawac halis ah, waxa ugu dambeeya ee aad u maleyneyso inaad ka fekereyso ayaa ah qolka gurmadka ee aad rabto inaad booqato iyadoo lagu saleynayo warshaddii ugu dambeysay ee ganacsiga, boorarka ama joornaalka emailka ee aad aragtay . Musqusha iibku runtii ma khusayso inta lagu jiro xaalad degdeg ah.
Si kastaba ha noqotee, suuqgeynta daryeelka caafimaadku waxay aad uga badan tahay suuqgeynta waaxyada xaaladaha degdegga ah iyo qeybaha daryeelka degdegga ah. Isbitaalada, rugaha daryeelka degdegga ah, iyo xarumaha caafimaadka waxay mas'uul ka yihiin dhiirrigelinta adeegyo ballaaran oo khariidad u noqda masafka iibka.
In kasta oo suuqgeynta daryeelka caafimaad ay lamid tahay noocyada dhaqameed ee suuqgeynta, bal aan eegno qaar ka mid ah dhinacyada gaarka ah ee suuqgeynta warshadan:
Dhacdooyinka Bulshada iyo Barnaamijyada
Xog cusub oo ka socota Adeegga Maal-gashadayaasha Moody waxay muujineysaa hoos u dhac weyn oo ku yimid socodka lacagta ee isbitaalka. Warbixinta Moody ayaa hoos uga dhacday 9.5 boqolkiiba sanadkii 2016 ilaa 8.1 boqolkiiba sanadka 2017 - hoos u dhac aan horay loo arag oo markii ugu dambeysay la arkay intii lagu jiray xiisadii dhaqaale ee 2008. Nambarada sidan oo kale ah si wanaagsan ugama muuqdaan xasilloonida dhaqaale ee muddada-dheer, waana taas sababta ay qaar badan oo ka mid ah hawl-wadeennada isbitaallada ay raadinayaan ilo dakhli oo dheeri ah.
Isbitaalada qaar waxay hada keeneyaan dakhli barnaamijyada fayoobaanta iyo dhacdooyinka gaarka ah iyagoo isku dayaya inay khasaaro dejinta waaxyaha kale. Barnaamijyada fayoqabka ayaan kaliya ka caawinayn kahortaga dhaawaca iyo jirrada, laakiin sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Fitness Medical, waxay sidoo kale gaarayaan xadadka tabarucaadka sida ugu sareysa boqolkiiba 30. Dhacdooyinka gaarka ah waxay noqon karaan ilo dakhli oo muhiim ah sidoo kale. Sannadka 2017 oo keliya, Isbitaalada Shabakadda Mucjisooyinka Carruurta kor u kacay wax ka badan $ 38 million iyada oo loo marayo shabakadda sanadlaha Dance Marathon.
Sida ganacsi kasta, sumcadda ayaa muhiim u ah soo jiidashada bukaanka oo keliya laakiin sidoo kale tayada sare. Goobaha dib u eegista macaamiisha, sida Yelp, waxay caan ku noqdeen bartamihii 2000s oo hadda soo jiidasho leh malaayiin isticmaale maalin walba. Darajooyinka Caafimaadka, oo ah bogga ugu horreeya ee dib u eegista daryeelka caafimaadka, ayaa jiray in ka badan 20 sano isagoo ka caawinaya bukaanada inay helaan adeeg bixiyayaal iyo isbitaallo tayo sare leh.
Marka la eego Sharciga Daryeelka La Awoodikaro ee bukaanka siinaya xakameyn badan oo ku saabsan bixiyaha ay doortaan, mas'uuliyadaha suuqleyda daryeelka caafimaadka mas'uuliyadaha ka saaran suuqgeynta sumadooda ayaa si weyn u koray. Hal dariiq oo deg deg ah kuwa ka ganacsada daryeelka caafimaadka ay ugu gudbin karaan jawaab celinta bukaanka isticmaalka wanaagsan waa ka faa'iideysiga software maaraynta sumcadda si loo ogaado cilladaha shabakadooda. Tani waxay sahlaysaa in la saxo cabashooyinka sida ugu dhakhsaha badan, iyadoo sidoo kale kordhinaysa soo-gaadhista faalooyinka togan ee bukaannada. Haddii dib u eegista xun ay tahay wax laga walwalo, ka faa'iideyso awoodda sahaminta qanacsanaanta bukaanka si loo garto arrimaha goor hore, ka hor intaanay u gelin bogagga ay dadku ku wajahayaan sida Healthgrades
Teknolojiyadaha Daryeelka Caafimaadka ee ugu dambeeyay
Waan ognahay macaamiisha inay jecelyihiin tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay. Tani waxay noqon kartaa xitaa run marka ay timaado daryeelka caafimaadka. Macaamiisha ayaa laga yaabaa inay ku fiicnaadaan lahaanshaha iPhone oo dhowr jiil ah oo jir ah oo leh shaashad dildilaac ah, laakiin ma faraxsanaan doonaan haddii sawirkoodii ugu dambeeyay ee maskaxeed lagu sameeyo mashiinka MRI ee xaalad la mid ah.
Jawaab ahaan, suuqleyda daryeelka caafimaadku waxay dejiyeen indhahooda ku aaddan suuqgeynta horumarka tikniyoolajiyadda oo ah qaab loo abuuro kala duwanaansho suuqa.
Waxay u badan tahay inaan sii wadi doonno inaan aragno qalliinno badan oo caawiya robot-ka iyo barnaamijyo lagu kordhiyay AI sannadaha soo socda. Tusaale ahaan, daraasad oo ay fulisay Iskuulka Caafimaadka ee Jaamacadda Stanford ayaa arkay kororka qalliinnada kelyaha ee lagu caawiyo robot-ka laga bilaabo 1.5 boqolkiiba oo la qabtay 2003 illaa 27 boqolkiiba 2015.
Maaddaama baahida loo qabo horumarka tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay ay kor u kacday, suuqleyda daryeelka caafimaadku waxay si dhow ula shaqeynayaan madax waaxeedyada si loo aqoonsado kala duwanayaasha cusub iyo farriimaha muhiimka ah bil walba iyo sannadle.
Inkastoo suuqgeynta daryeelka caafimaadka waxay la mid tahay qaabab dhaqameedka suuqgeynta, waxay miiska u keeneysaa aragti u gaar ah. Adoo ka faa'iideysanaya barnaamijyada iyo dhacdooyinka, diiradda saaraya maareynta sumcadda iyo iftiiminta tikniyoolajiyadaha ugu dambeeyay, suuqgeynta daryeelka caafimaadku waxay si guul leh ugu dhiseysaa wacyigelin ku saabsan adeegyo badan.
Tags: suuqgeynta daryeelka caafimaadkadaryeelka caafimaadka twittersuuqgeynta twitter daryeelka caafimaadkadarajooyinka caafimaadkamarketingmaaraynta sumcadReviewswaa maxay suuqgeynta daryeelka caafimaad
GroupHigh: Cilmi-baaris iyo Raad-raac Fidintaada Blogger